Safiirada Somalia iyo Angola u fadhiya Kenya oo ka wada hadlay dhibka haya Soomaalida Angola – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Safiirka cusub oo ay dowlada Angola u soo magacawday dalkani Kenya Amb, Virgilio Marques De Faria ayaa shalay booqday safaarada ay dowlada Soomaaliya ku leedahay dalka Kenya.
Safiirka Angola u fadhiya Kenya ayaa waxaa si heer sare ah usoo dhaweeyey dhigiisa dalka Kenya u fadhiya dowlada soomaaliya, Amb, Maxamed Cali Nuur Americo.
Amb, Virgilo Marques ayaa sheegay in uu mahadnaq balaaran uga wado dowlada Angola Dowlada Soomaaliya, isagoo sheegay in aanay marnaba dowladda Angola hilmaami doonin taageeradii balaarneyd ee ay dowladdii Soomaaliya ee hogaaminayey Jeneral Maxamed Siyaad Barre u fididsay xiligii ay xornimada raadineysay.
Danjiraha dowlada Angola ee dalka Kenya ayaa intaasi ku daray inay taasi badalkeeda haatan diyaar u tahay dowlada Angola inay gacan siiso dowlada Soomaaliya maadaama uu dalka Soomaaliya haatan ka soo kabanyo burbur baahsan oo saameeyey dhamaan Adeegyadii aasaasiga u ahaa jiritaanka nolosha aadamaha.
Danjiraha dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Amb. Maxamed Cali Nuur ayaa danjiraha dowlada Angola uga mahadceliyey booqashada uu ku yimid Safaarada Soomaaliya, isagoo dhanka kalana u gudbiyey danjiraha cabashooyin ku aadan wax ka qabashada dadka Soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyo ku yaala dalka Angola.
Safiirka cusub oo ay dowalda Angola u soo magacawday dalka Kenya Virgilio Marques De Faria ayaa balan qaaday in uu wax ka qaban doono sii deynta dadkaasi Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan xabsiyada dalka Angola.
Dalka Angola ayaa waxaa ku sugan kumanaan Soomaali ganacsato ah, kuwaasoo qaarkood ka cawdaan in booliska dalkaas dhibaatooyin kula kaco.
Muqdisho: Agaasime wasaaradeed oo xalay gurigiisa lagala baxay